गीतमार्फत गायकद्धय प्रदिप र छेवाङ डि को प्रश्न, सधै आपत र बिपत किन पर्छ सिन्धुलाई ? -गीतमार्फत गायकद्धय प्रदिप र छेवाङ डि को प्रश्न, सधै आपत र बिपत किन पर्छ सिन्धुलाई ? -
गीतमार्फत गायकद्धय प्रदिप र छेवाङ डि को प्रश्न, सधै आपत र बिपत किन पर्छ सिन्धुलाई ?
१४ श्रावण २०७७, बुधबार १९:५४ मा प्रकाशित
काठमाण्डौ । गायकद्धय प्रदिप लामा र छेवाङ डि स्याङबोको ‘सधैं आपत’ बोलको गीत बजारमा आएको छ ।
गीतमा “सधै आपत र बिपत किन पर्छ सिन्धु जिल्लालाई ,कतै बाढी पहिरो कतै भुकम्प सजक हुन अनुरोध छ सबै लाई , सधै आपत र बिपत किन पर्छ हाम्रो जिल्लालाई ” भनेर प्रश्न गरेका छन ।
उक्त गीतलाई छेवाङ डि स्याङबोले शब्द र संगीत गरेका हुन भने चर्चित गायक एंव संगीतकार कर्साङ लामाले संगीत संयोजन गरेका छन ।
पारिजात रेकर्डिङ स्टुडियोमा रेकर्ड गरिएको उक्त गीतमा गायकद्धय प्रदिप लामा र छेवाङ डि स्याङबोको स्वर रहेको छ । भिडियोलाई सुर्य लामाले छायांकन र निर्देशन गरेका छन ।